ALTBalaji အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（20.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် ALTBalaji - Watch Web Series, Originals & Movies
Altbalaji subscription service ကို₹ 100 * (3 လ) နှင့် Rs.180 * (6 လ) မှစတင်သည်။ 300 / - တစ်နေ့ကို paise 80 pata ကိုအွန်လိုင်းတွင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းကိုမမေ့ပါနှင့်။
ဆုကိုအနိုင်ရသည့်တစ်မျိုးတည်းသောအကြောင်းအရာများဖြင့်စာဖတ်သူများအားစာဖတ်သူများအားထောက်ပံ့ပေးသည့် subscription အခြေခံသည့်ဗီဒီယိုဖွင့်ဟဗီဒီယို လူကြိုက်များသရုပ်ဆောင်များပါ0င်သောဒါရိုက်တာများ။
- •သီးသန့်ဟိန္ဒူမူရင်း 72 ခုကိုရယူခြင်း - •အော့ဖ်လိုင်းမြင်ကွင်းကြည့်ရှုခြင်း Devices>
New & upcoming ဝက်ဘ်စီးရီး
•ကျိုးပဲ့သော0က်ဘ်ဆိုက်စီးရီး 3
Sidharth Shukla နှင့် Sona Ratheee တို့ကို ဦး ဆောင်နေပြီးလှပသော3ခုသည်သင်၏မျက်ရည်များဖြင့်ထားခဲ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည် ကျိုးပဲ့သောစုံတွဲ၏လှပသောပုံပြင်။ သူတို့အတူတူလာကြလိမ့်မည်နည်း သူတို့ဘာကြောင့်ခွဲနေတာလဲ အဘယ်ကြောင့်သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျိုးပဲ့နေပြီးလှပသော3ခုကိုအနိုင်ယူသည်မဟုတ်လော။ Puncch SHANDANKHARH Sharma, Samyukhta hega, Harshita Goshi, Harshita Goshi, urfi jave Puncch သည်ရာသီ2ကိုအနိုင်ယူပြီးရာသီဥတု2ကိုသင့်အားသင်၏ထိုင်ခုံနားတွင်ထားရှိမည်။ ၎င်းသည်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်လော။ • Hai Taubba
HAD Taubba သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ချစ်ကြည်ရေးနှင့်အခြားသောလူမှုအသွင်အပြင်အချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့် Anth Andology စီးရီးဖြစ်သည်။ Hai Taupba ဝက်ဘ်စီးရီးများသည်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၏အဆုံးအထိသင့်ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ငြင်းပယ်မှုပုံပြင်ကိုသက်သေခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား။
Manju Kapur မှစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေရန်ကွဲပြားခြားနားသောကျား, မရေးရာစံနှုန်းများအပေါ်တွင်မြင့်တက်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ခရီးကိုပြောပြသည်။ Weattbalaji တွင်လက်ထပ်ထားသောအမျိုးသမီးဝက်ဘ်ရိုင်းကိုကြည့်ပါ။
•သူ၏ဇာတ်လမ်းသည် Satyadeep Mishra, Priyamani Raj, Nitin Bhatia နှင့်အခြားလူကြိုက်များသရုပ်ဆောင်များပါ0င်သည့်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ ကြိတ်ခွဲထားသောဗျာဒိတ်ကျမ်း၌သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေသည့်စုံတွဲတစ်တွဲကိုသက်သေခံရန်ကြိုးစားသည့်စုံတွဲတစ်တွဲကိုသက်သေခံရန်သူ၏ဇာတ်လမ်း0က်ဘစီးများကိုကြည့်ပါ။
• Bekaaboo ရာသီ 2
TAHA Shabbir, Subha Rajbir, Priya Rajber, အခြားလူကြိုက်များသောသရုပ်ဆောင်များ, Bekaaboo ရာသီ2ဝက်ဘ်စီးရီး2ဝက်ဘ်စီးရီးသည်ကျော်ကြားမှု, အမုန်းနှင့်လက်စားချေခြင်းပုံပြင်ဖြစ်သည်။ Anaysha ဘာဖြစ်သွားသလဲ သူမတစ်ယောက်ယောက်ကိုသတ်သလား။ သူမ၏ဘဝတွင်အရင်းနှီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကားမည်သူနည်း။ Watch Bekaaboo2Web Series ကို altbalajito အတွက်သာရှာပါ။
အကောင်းဆုံး Altbalaji ဝက်ဘ်စီးရီး
အကောင်းဆုံး Altbalaji Web seri
Bicchoo Ka Khel Khel သည်ပျော့ဖတ်ပြဇာတ် ဝိဇ္ဇာ၏ byaras ၏ bylanes တွင် everylets ၏မျက်လုံးများရှေ့တွင်ကျူးလွန်သောရာဇ0တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြင်း, Bicchoo Ka Khel ကို Altbalaji တွင်သာကြည့်ပါ။
သင်၏ဘ0ကိုအမွှေးအကြိုင်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လောကတွင်ဂန္ဒီ Baat6၏0င်ရောက်မှုနှင့်အတူပျော်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံအချို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။ Gandii Baat ဝက်ဘ်စီးရီးအားလုံးသည် Altbalaji app တွင်သာစီးဆင်းနေပြီဖြစ်သည်။
အချစ်ဇာတ်လမ်း။ အာရတ်ဝင်းစီးရီးတွင်ဖြစ်ရပ်များ၏စီးရီးသည်မည်သို့တိုးပွားစေခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကိုမည်သို့ ဦး တည်နေသည်ကိုကြည့်ပါ။
Watch Thriller ကပြသခဲ့သည်
သက်သေခံရိုးဒီဇိုင်းကျောက်နက်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုထုပ်ပိုးသည့်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ထုပ်ပိုးသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် streaming ။
လူကြိုက်များသောဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်နှင့်မကြာသေးမီက blolbusters အချို့ကို Altbalaji တွင်သီးသန့်ရှိသည်။
တုံ့ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်မေးမြန်းချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု. မေးပါ။ [email protected]
privs://www.altbalaji.com/ Privacy-Policy. အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ - https://www.altbalaji.com/termpsofuse
ဘာအသစ်လဲ ALTBalaji - Watch Web Series, Originals & Movies 2.6.1
Sursuri-Li I ULLU originals I Official Trailer I Releasing on: 1st July